Izinsizakalo Zokuvikela Impahla Nokubonisana
Vikela izimpahla zomuntu kusuka kwisikweletu sebhizinisi, izingxabano zabalingani bebhizinisi, amacala enkantolo, izahlulelo ngisho nehlukaniso. Sikusiza ukuthi uqale ibhizinisi, ukhulise ibhizinisi lakho futhi uvikele okubaluleke kakhulu, ingcebo yakho oyiqongelela empumelelweni yakho.
Sinikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokuvikela impahla nezimoto eziqala ngamathuluzi wobumfihlo futhi zifinyelela ezinhlelweni eziphelele zokuvikela impahla. Isiqalo kunoma yiluphi uhlelo lokulondolozwa kwengcebo ukudala ibhizinisi elisemthethweni elihlukile lokuvikela ingcebo yakho siqu kwisikweletu.
Ama-Corporations nama-LLC ayindlela ejwayelekile yokuvikelwa kwempahla kwisikweletu sebhizinisi esivikela ingcebo yomnikazi webhizinisi ezikweletini nasezimalini zebhizinisi - isembozo sebhizinisi ungqimba lokuqala lokuvikelwa kwempahla lwabaninimabhizinisi.
Ubumfihlo bezezimali kanye nobumfihlo bokuba ngumnikazi kusiza ukwehlisa amathuba okubhekiswa ecaleni elicashile. Sinikezela ngezinsizakalo zobumfihlo lapho sakha ibhizinisi elisha njengohlelo lonyaka kanye nokuthenjwa komhlaba okuvumela abanikazi bezindawo ukuthi banikeze isihloko se-estate real ngegama le-trust. Ubumfihlo bokuba ngumnikazi nokuvikelwa ngezinhlangano ezihlangene kudala ungqimba oluqinile lokuvikela.
Kunezinhlobo eziningi zokwethemba ezivikela amafa emacaleni okuqulwa kwamacala. Impahla efakwe ethembeni lezinjongo zokuhlela izakhiwo ivikelwe emacaleni omuntu siqu kumuntu ozuzayo.
Imithetho eqinile yokuvikela izimpahla zakho iza ngezenzo zokuzethemba ezizinzile. Ama-trust akhethekile okuvikela izimpahla akhelwe ngqo ukuvikela izimpahla zakho kwisikweletu esizayo lapho umuntu engakwazi ukukhokha futhi azuze ezimpahleni zokwethembana.
Lawa mathuluzi akhethekile kakhulu futhi ayatholakala emikhakheni ye-Domestic and Offshore. Singochwepheshe ekwakhiweni kwalezi zimoto ezivikelayo nezinsimbi zomthetho zokuvikela impahla yakho.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuzivikela ekumangalelweni ngamacala ukusetha ukwethenjwa kokuvikelwa kwempahla. Ngeshwa, ama-trust asekhaya awanamarekhodi amahle womkhondo. Ama-trust ase-Offshore, ngakolunye uhlangothi, anomlando omuhle kakhulu wamacala wokuvikelwa kwempahla. A I-Cook Islands iyakuthemba kanye ne-Nevis trust inamarekhodi amabili wethrekhi.
Ama-IRAs avame ukukhululwa noma ahlanganyele kokungafani namacala. Noma kunjalo, ukuvikelwa kwabo kulinganiselwe. Futhi akukho okuvikelekile kwe-IRA ekuhlukaniseni ngaphandle kokuthi usebenzise amathuluzi asemthethweni afanele. In Ukuvikelwa Kwasemthethweni kwe-IRA Ngombuso, uzofunda ukuthi ungayivikela kanjani i-IRA yakho kwesehlukaniso noma amacala.